Ac Milan 3-2 Hellas Verona: Milan Oo Guul Gaartay Kana Soo Kabsatay Labo Gool Iyo Inter Milan Oo La Garaacay
HomeWararka CiyaarahaAc Milan 3-2 Hellas Verona: Milan oo guul gaartay kana soo kabsatay Labo Gool iyo Inter Milan oo la Garaacay
kulamo ka tirsan Horyaalka Serie A italy ayaa la ciyaaray iyadoo Kooxda Ac Milan ay guul Dirqi ah ka gaartay kooxda Verona kulan ka dhacay Garoonka San Siro.
Ac Milan ayaa kasoo kabsatay labo gool oo deg deg ah kuwaasi oo qeybta hore looga hormaray Gool uu dhaliyay G. Caprari daqiiqadii 7aad iyo gool rigoore ah uu ku daray A. Barak ciyaarta oo socota 24 daqiiqo iyadoo lagu kala nastay labadaasi gool.
Qeybta Danbe Ac Milan ayaa labadii gool bar-bareesay iyagoo si lamid ah dhaliyay gool Caadi ah iyo mid Rigoore ahaa O. Giroud iyo F. Kessie ayaana shabaqa soo taabtay ka hor inta aysan goolka 3aad helin kaasi oo ahaa mid uu iska dhaliyay K. Guenter oo Verona ka tirsan guud ahaan ciyaarta ayaana ku soo dhamaatay 3-2.
Dhanka kale Inter Milan ayaa guul daro lama filaan ah kala kulantay kooxda Lazio kulan ku soo dhamaaday 3-1.
Inter Milan ayaa hogaanka ku qabatay gool rigoore ahaa uu u dhaliyay I. Perisic qeybta hore lakin qeybta Danbe Lazio ayaa heshay 3 Gool.
C. Immobile ayaa gool rigoore ku bar-bareeyay Daqiiqadii 64aad waxana Lazio hogaanka u sii dheereeyay Felipe Anderson daqiiqadii 81aad ee Ciyaarta ka hor inta uusan goolka 3aad ku darin S. Milinkovic-Savic dhamaadka ciyaarta. guud ahaan kulankan ayaa ku soo dhamaaday 3-1
Natiijo ahaan Ac Milan ayaa qabatay Hogaanka Horyaalka taliyaaniga iyadoo leh 22 dhibcood halka Napoli oo ku soo xigto ay leedahay 21 dhibcood inter Milan ayaana ku jirta booska 3aad iyagoo leh 17 dhibcood.